कुशल थलङले ल्याए –आनाकानी गर्छौं किन ? - Limbuwan khabar
कुशल थलङले ल्याए –आनाकानी गर्छौं किन ?
सोमबार, २६ माघ, २०७७ रातीको ०९:२९ बजे, लिम्बुवान न्युज
काठमाडौं। गायक कुशल थलङले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । थलङले आनाकानी गर्छौ किन हौ ठूली… बोलको गीत लिएर आएका हुन् ।
रोशन थलङको रचना, अशोक लोहरुङ राईको एरेन्जमा कुशलले संगीत र स्वर भरेका हुन् ।
म्युजिक भिडियोमा सार्वजनिक गरिएको गीतमा कुशल थलङ, सुजाता थुलुङ राई, विष्णु मोक्तान, दिनेश माङ्मु लिम्बू, कानुन लिम्बू थेबे, रोयल लिम्बू, करिश्मा क्षेत्री, कृति मिभक, सबनम राईले अभिनय गरेका छन् ।
आफ्ना भाईहरुले विवाह गरिसक्दा पनि जेठोको जीवन आनाकानीमै बितेको दिनचर्यालाई रोमाञ्चक ढङ्गले भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
भिडियोको लागि सोम मगरातीको श्रृङ्गार, छायांकन भूपेन्द्र तुम्बाहाम्फे, पोष्ट प्रोडक्सन रमेश मिभक र पुष्पा तुम्बाहाम्फे, सम्पादन अनिल राना र निर्देशन दिनेश माङ्मुले गरेका हुन् ।
(भिडियो कुशल थलङको आफ्नै च्यानलबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ)